ခဈြသူဆီက သိနျးပေါငျးရာခြီ တနျဖိုးရှိတဲ့ အကောငျးစားလကျေ ဆာငျတှေ ရလို့ ပြျောတဲ့အပြျောတှကေို ဝမြှေပေးလာတဲ့ နနျးစုရတီစိုး – Shwe Likes
ပရိသတျ ကွီးရေ သ ရုပျဆောငျ နနျးဆုရတီ စိုးကေ တာ့ ဆယျစုနှဈေ ကျြာတို ငျအောငျ အနုပညာေ လာကမှာ ထှနျးလ ငျးတောကျ ပနတေဲ့ ကွယျပှငျ့လေးအွ ဖဈ ရပျတညျ လကျြ ရှိနပေါတယျ။ အ သားလေးက ဖွူဖှေးနုနတောကွောငျ့ ဂပြနျမ
လေး လို့တောငျ ထငျမှတျရေ လာကျပါတ ယျနျော။ အဆိုတျော G Fatt နဲ့လမျးခွှဲ ပီးမကွာခ ငျမှာပဲ ခဈြသူအသဈ ထပျရသှားခဲ့ ပါတယျ။ လကျရှိမှာလညျး သူမရဲ့ခဈြသူလေး နဲ့ ပြျောရှငျစ ရာကောငျးတဲ့ အခဈြခရီးလမျးကို အတူလြှောကျလှ မျးနတော ဖွဈပါတယျ။
ခဈြသူေ လးကလညျး နနျးဆုဘိုခငျြ တာမှနျသမြှ အကုနျဖွညျ့ဆ ညျးပေးနေ တာကွောငျ့ ပရိသတျေ တှကပါဘေးကေ နကွညျ့ပွီး အားကနြေ ရတာ ဖွဈပါတယျ။ မကွာေ သးခငျက နနျးဆုရဲ့ Instagram Story မှာ ပုံလေးနှ ဈပုံတငျထားတာ ဖွဈပါတ ယျ။ဒါကတော့
သိနျးပေါငျး ရာခြီတနျဖိုးရှိသော လကျကိုငျအိတျနှ ဈလုံးကို ခဈြသူထံမှလ ကျဆောငျရရှိခဲ့တဲ့ အတှကျအတိုငျးထ ကျအလှနျ ပြျောရှငျေ နတာ ဖွဈပါတယျ။ နနျးဆုဟာ ကမ်ဘာကြျောတံဆိပျတှေ ဖွဈတဲ့ “ Hermes “ နဲ့ “ Jimmy Choo” တို့မှ ထုတျလုပျတဲ့
လကျကိုငျ အိတျလေးတှေ ဖွဈပွီး ကာလပေါကျဈေးအေ နနဲ့ သိနျးရာခြီရှိေ လာကျပါတယျ။ လိုခငျြတာမှနျသမြှ ဖွညျ့ဆညျးေ ပးနတေဲ့ ခဈြသူလေးကို ပိုငျဆိုငျ ထားလို့ နရေ့ကျတိုငျး
ပြျောရှငျနတေဲ့ နနျးဆုရတီ စိုးအတှကျ ပရိသတျကွီး လညျး ဝမျးသာစကားလေးတှေ ရေးပေးခဲ့ကွပါအုံးနျော.. Source: Nan Su Yati Soe
ပရိသတ် ကြီးရေ သ ရုပ်ဆောင် နန်းဆုရတီ စိုးကေ တာ့ ဆယ်စုနှစ်ေ ကျာ်တို င်အောင် အနုပညာေ လာကမှာ ထွန်းလ င်းတောက် ပနေတဲ့ ကြယ်ပွင့်လေးအြ ဖစ် ရပ်တည် လျက် ရှိနေပါတယ်။ အ သားလေးက ဖြူဖွေးနုနေတာကြောင့် ဂျပန်မ
လေး လို့တောင် ထင်မှတ်ရေ လာက်ပါတ ယ်နော်။ အဆိုတော် G Fatt နဲ့လမ်းခြွဲ ပီးမကြာခ င်မှာပဲ ချစ်သူအသစ် ထပ်ရသွားခဲ့ ပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း သူမရဲ့ချစ်သူလေး နဲ့ ပျော်ရွှင်စ ရာကောင်းတဲ့ အချစ်ခရီးလမ်းကို အတူလျှောက်လှ မ်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်သူေ လးကလည်း နန်းဆုဘိုချင် တာမှန်သမျှ အကုန်ဖြည့်ဆ ည်းပေးနေ တာကြောင့် ပရိသတ်ေ တွကပါဘေးကေ နကြည့်ပြီး အားကျနေ ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာေ သးခင်က နန်းဆုရဲ့ Instagram Story မှာ ပုံလေးနှ စ်ပုံတင်ထားတာ ဖြစ်ပါတ ယ်။ဒါကတော့
သိန်းပေါင်း ရာချီတန်ဖိုးရှိသော လက်ကိုင်အိတ်နှ စ်လုံးကို ချစ်သူထံမှလ က်ဆောင်ရရှိခဲ့တဲ့ အတွက်အတိုင်းထ က်အလွန် ပျော်ရွှင်ေ နတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နန်းဆုဟာ ကမ္ဘာကျော်တံဆိပ်တွေ ဖြစ်တဲ့ “ Hermes “ နဲ့ “ Jimmy Choo” တို့မှ ထုတ်လုပ်တဲ့
လက်ကိုင် အိတ်လေးတွေ ဖြစ်ပြီး ကာလပေါက်ဈေးအေ နနဲ့ သိန်းရာချီရှိေ လာက်ပါတယ်။ လိုချင်တာမှန်သမျှ ဖြည့်ဆည်းေ ပးနေတဲ့ ချစ်သူလေးကို ပိုင်ဆိုင် ထားလို့ နေ့ရက်တိုင်း
ပျော်ရွှင်နေတဲ့ နန်းဆုရတီ စိုးအတွက် ပရိသတ်ကြီး လည်း ဝမ်းသာစကားလေးတွေ ရေးပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်.. Source: Nan Su Yati Soe